सोनियालाई कंगनाको प्रश्न–‘मेरो घर भत्कदा तपाई दुःखी हुनुहुन्न ?’
सुशान्तका बुवाले दर्ता गराए रियाविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी, आत्महत्या गर्न बाध्य पारेको आरोप
बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणमा नयाँ मोड आएको छ। सुशान्तका बुवा केके सिंहले सुशान्तकी गर्लफ्रेन्ड भनिएकी रिया चक्रवर्तीविरुद्ध प्रहरीमा उजूरी दर्ता गराएका छन्।
यी ९ तस्बिरमा हेर्नुहोस् बाल्यकालदेखि अहिलेसम्म कति परिवर्तन भइन् प्रियंका चोपडा
कट्रिना कैफका यी तस्बिरले पाए चौतर्फी वाहवाही
लिउड नायिका कट्रिना कैफ सोसल नेटवर्किङ साइट इन्स्टाग्राममा निकै सक्रिय रहन्छिन् र आफ्ना थुप्रै तस्बिर सेयर गरिरहन्छिन् । उनले पोस्ट गर्ने तस्बिरको निकै चर्चा समेत हुनेगर्छ ।
गायिका अनिता चलाउनेको यो बर्ष ‘यस्तो बनोस् मेरो तीजले चर्चा बटुल्दै (हेर्नुहोस् भिडियोसहित)
गायिका तथा संचारकर्मी अनिता चलाउनेको यो बर्ष ‘यस्तो बनोस् मेरो तीजले चर्चा बटुलीरहेको छ । हरेक बर्ष जस्तै यो बर्ष पनि उनले निकै राम्रो तीज गीत बजारमा ल्याएकी छन् ।
कुन राशीका मान्छे कति सेक्सी ?
हामी सबैलाई थाहा छ एक ब्यक्ति अर्को भन्दा फरक हुन्छ । मानिस अनुसार रुची पनि फरक फरक हुन्छन् । कसैलाई गुलाफ मन पर्छ त कसैलाई गुराँस । कसैलाई गुलियो खान मन पर्छ त कसैलाई नुनिलो ।
म त गाउँकी केटी, सेक्समा काँचै छु – एलिना
अक्षयको ‘ट्वाइलेट’ बक्स अफिसमा चम्कियो
शुभले ल्याए ‘मलाई माया गर’
काठमाडौं - गायक शुभ तामाङको दोस्रो एल्बम ‘मलाई माया गर’ सार्वजनिक भएको छ । राजधानीमा हालै आयोजित कार्यक्रममा गीतकार डा. भोला रिजालले एल्बम सार्वजनिक गरे । डा. रिजालले शुभका गीत दर्शकका लागि कर्णप्रिय हुने बताए ।
नेपथ्यले ल्यायो आइफोनबाट खिचेको भिडियो ‘घरको कुरा’
काठमाडौं– नेपथ्यको २५ वर्षे उत्सवको कोसेली श्रृृंखला स्वरुप आइफोनबाट खिचेको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । भिडियोमा प्रयोग भएको गीत ‘घरको कुरा’ सन् २००४ को जून महिनामा लेखिएको हो । जुन गीतलाई नेपथ्यले २००५ मा आफ्नो छैटौ एल्बम ‘घटना’ समावेश गरेको थियो ।
सुशील र वर्षाको आकर्षक रोमान्सको चर्चा
काठमाडौं – अभिनेता सुशील श्रेष्ठ र अभिनेत्री बर्षा शिवाकोटी अहिले चर्चामा छन् । शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आउने चलचित्र ‘कारखाना’को कारणले दुबैको चर्चा चुलिएको हो ।
५० रुपैयाँ थियो शाहरुखको पहिलो कमाई, २५ वर्षमा कमाए यत्ति सम्पत्ति
बलिउडमा शाहरुख खानको २५ वर्ष पुरा भइसकेको छ । फिल्मी क्षेत्रमा उनको जताततै वाहवाही त छँदै छ तर उनले फिल्मी जगतभन्दा बाहिर पनि जुन सफलता हाँसिल गरेका छन् त्यो प्रशंसनीय छ ।
चलचित्र ‘देश–परदेश’ बन्ने
काठमाडौं – राजु गिरीको निर्देशनमा चलचित्र ‘देश–परदेश’ बन्ने भएको छ । राजधानीमा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा चलचित्र निर्माण शुभ–साइत घोषणा भयो ।
अवार्ड फेयर नहुने आरोप लगाउँदै दीपकले गरे सहभागी नहुने निर्णय
काठमाडौं – एनएफडीसी अवार्ड समारोहबीचमै छोडेर निस्किएपछि विवादमा घेरिएका अभिनेता दीपकराज गिरीले अब कुनै पनि अवार्ड समारोहमा भाग नलिने भएका छन् ।
यी हुन् जोनी लिभरकी छोरी, लण्डनमा पढिन् अहिले गर्छिन् कमेडी
हास्यकलाकार जोनी लिभरले आफ्नो अन्दाजले थुप्रै दर्शक हँसाएका छन् र उनी धेरैको रुचीमा पनि पर्छन् । तर पछिल्लो थुप्रै वर्षदेखी उनी बलिउडबाट टाढा छन् ।